सफल सहकारीका लागि असल दृष्किोण | bethanchokkhabar.com
बिहिबार, साउन २८, २०७८ | २१:१६:१७ |
सबै मिलेर काम गर्ने तरीका सहकार्य हो । हामी सदियौं देखि एक आपसमा भाइचाराको सम्वन्ध र सहयोगीको भावना अनुसार एक अर्कालाई सहयोग आदान प्रदान गर्दै आइरहेका छौं । एक जनालाई दुख्दा सबैलाई दुख्ने हाम्रो मायालु स्वभाव र मनका कारण हामी अन्य देशका तुलनामा सम्बेदनशिल र फरक पनि छौं । जहाँ हामी सहकार्य गर्दछौं त्यहाँ भाइचाराको सम्वन्ध जोडिन्छ । एक अर्कालाई सुख दुःखमा साथ दिई गरिने सबै कार्यहरु वा सहयोगी कामहरुलाई हामी सहकारीताको भावना सँग जोड्न सक्दछौं । मन र भावनाले जोडिएका कार्यहरु गर्दा हाम्रो मनमा सँधै आनन्द प्राप्त हुन्छ । आनन्दले शान्ति दिन्छ अनि त्यो शान्तिले खुसि मिल्छ त्यो खुसि नै मानिसको जीवनको अत्यन्त महत्वको पक्ष हुन्छ । हो यहि सद्बिचार सहित हामीले आफुले आफुलाई सबै पक्षहरुमा जोड्न सक्दछौं ।
सहि बिचार, सहि दृष्टिकोण, सहि आचरणले मानिसलाई सफलताका लागि डोर्याउँछ । मानिस हरेक हिसावले आफ्ना कार्यहरु सम्पन्न गर्नका लागि दिनभरी तनावमा रहन्छ । कसैले त्यहि बिषयलाई सहजताका साथ सम्पन्न गर्न सक्दछ भने कतिले बिभिन्न तनावका बाबजुद पनि कार्य अगाडि बढाउन सक्दैनन । बिहान उठ्ने बित्तिकै आफ्ना वरीपरीका बिषयहरु र गर्नुपर्ने कामहरुलाई सम्झेर तनाव लिने गर्दछ । दिनभरी गर्नुपर्ने विभिन्न कार्यहरुलाई कसरी गर्ने होला भन्ने जस्ता बिचार मनमा राख्दछ । सुरुमै यस्ता बिषयमा तनाव लिएपछि दिनभरी काम गर्नुपर्ने अन्य पक्षहरु तनावमै वित्न जान्छन अनि कार्यहरु सम्पन्न नहुनसक्छ भने गरि हालियो भनेपनि राम्रो हुदैन । बिभिन्न ब्यक्तित्वहरुको भनाई अनुसार मानिसले सकारात्मक रुपमा कामगर्ने बानीको विकास गराउनुपर्दछ ।
सकारात्मक सोचको विकासले मानिसलाई सँधै ऊर्जा प्राप्त हुन्छ भन्ने प्रमाणहरु राख्दछन् । यसका केहि टिप्सहरु समेत उनीहरुले प्रतिपादन गरेका छन् समग्रमा सकारात्मक रुपमा औल्याउनुपर्ने विविध पक्षहरुमा आफुले आफुलाई परिमार्जन गर्न सकेमा मानिस नयाँ अध्याय सुरु गर्न सक्दछ । सहकारीताका सन्दर्भमा अलि गहकिलो र यथार्थमा आधारित भई मनमा उब्जेको केहि बिषय तथा आफ्नो बुझाई राख्न मन लाग्यो । अलि तितो यथार्थ अनि भोगाई तथा प्रबृतिहरु माथि मेरो शब्द उठेका छन आजकल हाम्रा सामु सहकारीका अभियन्ता धेरै भेटिन्छन् । चोक, चियापसल, सभा, सम्मेलन, गोष्ठि, सेमिनार, भाषण अनि सहकारीका बिचार राख्नकालागि यूवा, बृद्ध, महिला सबै पक्षहरुमा अलिकती पनि नथाक्ने गरी गफ चुटिरहेका सबैतिर देखिन्छन् । जानेर होस या नजानेर सबैले सहकारीको वकालत गर्दै हिड्दा लाग्छ कि सहकारी दिन दुई गुना अगाडि बढ्दैछ । राज्यको तिनखम्बे अर्थ नीतिमा सहकारी सर्वोपरी छ भनेर भाषण गर्नकोहि भन्दा कोहि कम छैन । सहकारी ऐनकाबिषयमा सबैजना जरोसम्म जानकार भएका जस्ता बिचार सम्प्रेषण गर्दछन् । कानून अनि नियम, र नियमावलीमा त सबैजना आफैले सबै कुरा थेगेको जस्तो कुरा राख्छन् यसो हेर्यो सबैतिर सहकारी नै सहकारी छ । लाग्छ सहकारीका बारेमा देश निकै अगाडि छ । अझ काभ्रे जिल्लामा त यस्ता सहकारीका अभियन्ताहरु को झान खाँचो छैन ।
के अव सबै बिषयहरु कुरामा नै सिमित भएर हुने हो त ? भन्ने चासो कता कता देखिन्छ । एउटा घरमा भएका सबै सहकारीका नेता र शेयर सदस्यहरु भएको जस्तो आभाष हुन्छ ।जिल्लामा नै सबै सहकारी अभियन्ता, कसैलाई कसैको जरुरी नै छैन । कोहि कसैको सहकारीका बारेमा बिचार राख्न लागे भने कुरा काट्नेको कमी छैन यहाँ । जन्मदै सहकारीका बिचार बोकेर अभियन्ता भएको जस्तो कुरा राख्छन । यसरी गफी मात्र भएर सिंगो सहकारीको अभियान सफलहोला त ?निकै चासो र चिन्ताको बिषय बनेको छ यहाँ न त कसैले कसैको सहकारीको बारेमा चिन्ता छ न त सहकारी अभियानकै आफुले नेतृत्व गरीरहेको सहकारी संस्थातथाआफ्ना शेयर सदस्यहरुको त ख्याल छैन भने सिंगो सहकारीको अभियानका बिषयमा कसरी प्रस्तुत हुने होला अव सबै सहकारी आन्दोलनका साथिहरुले अति संम्बेदनशिल भएर चासो गर्ने समय आएको छ ।
सहकारी संस्थाहरु सञ्चालन गर्दैमा सिंगो सहकारी आन्दोलकै मशिहा बन्न सकिदैन भन्ने बिषयको पाठ कसले पढाउने होला यहाँ ? यस बिषयमा छलफल र अभियान चलाउनै पर्ने भएको छ । जिल्लामा रहेका सबै सहकारीहरुका सञ्चालनका अवस्थाका बारेमा हामी सबैको साझाधारणा बनाउनु पर्ने भएको छ । सहकारी संस्थाहरुको अवस्था हेर्दा लाग्छ सामूदायिक स्तरमा शेयर सदस्यहरुको दैनिकि वा जीवनीलाई आधार मानेर सञ्चालन भएका सहकारी संस्थाहरु कमै मात्र पाइएलान की जस्तो लागि सकेको अवस्था छ । शहर बजारमा देखिएका सहकारी संस्था र ग्रामीण समुदायमा दर्ता भई सञ्चालन भएका सहकारी संस्थाहरुको हभिगत कस्तो होला त भन्ने बिषयमा हाम्रो चासो जानुपर्छ भन्ने लागेको छ ।
बिचार राख्नु राम्रो कुरा हो बिचारले नै मानिसलाई ज्ञान प्रदान गर्दछ । ज्ञानले बिचालाई फराकिलो समेत बनाउँदछ । बिचार पस्कदै जाँदा आम मानिसको धारणामा परिवर्तन ल्याउँछ । कुनैपनि बिषयमा बिचार पस्कँदा सबै भन्दा पहिला सकारात्मक सोचको विकास हुनु जरुरी हुन्छ । सहि अर्थमा राखेको वा शुद्ध मनले गरेका हरेका कामहरु समयमै सफल पनि हुन्छन् । मानिसमा सकारात्मक सोच त्यसै आउँदैन सकारात्मक सोचका लागि पहिला उसले बिषय प्रति धारणा बनाउन सक्नुपर्दछ । सहकारी आन्दोलन तथा अभियानमा लागेका ब्यक्तिहरुले त झन आफ्नो क्षेत्र नै सोहि भएका कारण पनि सम्वन्धित बिषयमा समान बुझाईलाई आफ्नो लक्ष्य बनाई अगाडि बढ्नुको विकल्प पनि छैन ।
माथिका बिषयहरु उठान गदैै गर्दा पंक्तिकार नै सहकारी आन्दोलनको मशिहा हो त ? सिंगो सहकारी आन्दोलन यसैले मात्र थेगेको होत ? वा सहकारी उसैले मात्र बुझेको हो त ? भन्ने बिषयमा विभिन्न प्रश्न उठन सक्लान तर हाम्रा अगाडि उठेका, समुदायमा प्रश्न खडा भएका बिषयलाई सबैका सामु उठान कसैले न कसैले गर्नुपर्दछ यो कार्य अभियानकर्ता भन्दा अरुको हुनै सक्दैन । समाजमा उठेका वा देखिएका विविध पक्षहरुलाई आम सहकारीका क्षेत्रमा राख्दा यसले सकारात्मक रुप लिएर भोलिका दिनमा सिंगो आन्दोलन नै सुधारात्मक देखिन्छ भन्ने हो । आम मानिसमा देखिएका निराशाहरुलाई यसले आशामा परिणत गर्दछ भने हौसला समेत पैदा गर्दै सकारात्मक सन्देश दिन सफल हुन्छ त्यसैले आजको समय सहकारी आन्दोलनका लागि र यसको सुधारका लागि सबैपक्षहरु मिलेर समृद्ध सहकारी निर्माण गर्ने समय भएकाले यस्तो पक्षमा सकारात्मक सोचको विकाससँगै अगाडि बढौं हामी अवस्य गन्तब्यमा पुग्न सक्दछौं र सहकारी पनि आफै गुणात्मक बृद्धि भई सफल हुनेछ ।
(लेखक जिल्ला सहकारी संघ काभ्रेका अध्यक्ष हुन )